It is me. Ko Niknayman.: နှမချင်း မစာနာသော စစ်လုံထိန်းမုဒိန်းကောင်များရဲ့မိုက်ရိုင်းချက်။
နှမချင်း မစာနာသော စစ်လုံထိန်းမုဒိန်းကောင်များရဲ့မိုက်ရိုင်းချက်။
ကျွန်မ.. ကျွန်မ.. လက်နက်မချ
ကျွန်မ မသေ.. မျက်ရည်မကျ
(၁၉၈၈ခုနှစ် မတ်လအရေးအခင်းတွင် မဆလ လုံထိန်းတပ်တို့ ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရပြီး၊ ထောင်တွင်းတွင် အဓမ္မမုဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရသော ရန်ုကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦး၏ ရင်တွင်းခံစားချက်။)
Posted by Ko Niknayman at 7:10 AM
စွမ်းအားရှင်နှင့်ကြံ့ ဖွတ်များ အလိုရှိသည်။
"သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့လူထုတရားနာပွဲ"
စစ်တွေတွင် ရဟန်းသံဃာတော်များ ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွား
ပြည်သူ့ ရင်သွေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဘ၀ အေးချမ်းဖို့လြူ...
နအဖရဲ့ မင်းကျင့်တရား (၁၀) ပါး။
ပြည်သူများ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ် နားလည်စာနာရန် စွမ်းအားရ...
(၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် ဒီမိုက...
ပြည်သူ့ လှုပ်ရှားမှု စကြမည်။
မြန်မာပြည်သူတွေ စုပေါင်းတိုက်ပွဲစကြဖို့အချိန်ကျေ...
၁၉၈၈ ခုနှစ် အချိန်ကာလအတွင်းက သီချင်းတစ်ပုဒ်
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံအတွင်း ဆန္ဒပြ ကြွေးကြော်
နှမချင်း မစာနာသော စစ်လုံထိန်းမုဒိန်းကောင်များရဲ့...
၈၈ နေ့ စွဲမှတ်တမ်း
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ မှတ်တမ်းမဲ့ မှတ်တမ်း